Ofdị nke usoro ala: anticline na synclinal | Netwọk Mgbasa Ozi
Ofdị folda: anticline na syncline
Mgbe na geology anyị na-ekwu maka nhazi na ngwakọ nke ala ụwa, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere ikwu banyere folds. Folds bụ ụlọ ndị kachasịsịsịsị emetụta ihe niile gbasara ala. Ndị kacha mara amara bụ anticline na mmekọrịta. Maka nke a, anyị ga-arara edemede a dum na-ekwu maka ụlọ na mkpa nke ụdị folds dị iche iche na njirimara ha.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere anticline na syncline fold, nke a bụ post gị.
1 Gịnị bụ folds
2 Akụkụ nke ogige
3 Nhazi ọkwa nke folds
4 Anticline na mmekọrịta
5 Morphology nke anticline na synclinal fold
Gịnị bụ folds
Folds abụghị ihe ọ bụla karịa ihe owuwu ndị e guzobere n'ihi nrụrụ nke ihe ndị dị na mbara igwe. Ọ dị mkpa ịgbakwunye na folds nke ihe a anaghị emepụta mgbaji agbaji. A na-eme usoro ihe ọmụmụ ndị a site na nrụrụ plastik nke a na-esite na ya nrụgide nke ụfọdụ nrụgide tectonic, ma mkpakọ na mgbasa.
Ọ bụrụ na anyị echeta ihe niile metụtara Efere Tectonic anyị nwere ike ịhụ na eriri ụwa dị iche iche dị iche iche tectonic na ha anaghị edozi. Enwere oku convection ugbu a nke uwe mgbokwasị nke na-eme ka efere ndị ahụ na-aga n'ihu na nke a bụ ihe mere kọntinent ji aga n'ihu. Ya mere, a na-etolite folda ahụ n'ihi ịdị adị nke ihe dị iche iche na plastik ma ọ bụ omume rụrụ arụ dị ka nkume sedimentary.
Akụkụ nke ogige
Ugboro nke ọ bụla nwere akụkụ dị mkpa dị mkpa iji nyochaa. Akụkụ ahụ bụ ụgbọ elu mpụta nke na-etolite ogige. 2 flanks dị mkpa na-etolite a n'ogige atụrụ. Enwere ike ịkọwa akụkụ a ka ị na-agbaso elu ebe ihe ndị ahụ dị.
Akụkụ ọzọ nke ogige bụ axis ma ọ bụ mgbatị na ọ bụ akara nke kwekọrọ na nnukwu curvature nke ogige ahụ ma mepụta ya site na nkwụsị n'etiti akụkụ ya na akụkụ ya dị iche iche ma ọ bụ nke dị n’elu. Planegbọ elu axial bụ akụkụ ọzọ nke ogige ma mepụta ya site na njikọ n'etiti ahịrị nke anyụike nke akwa ọ bụla nke ogige ahụ. Dabere na ụgbọ elu axial nke ọ bụla n'ogige atụrụ, ọ ga-enwe akụkụ ntụgharị dị iche iche.
Nhazi ọkwa nke folds
Ugbu a, anyị ga-ekwu maka ụdị folda dị iche iche dịka nhazi ha na ọdịdị ha. E nwere ụzọ dị iche iche ị ga-esi kekọta folda ahụ na nke kachasịkarị bụ ndị metụtara ụzọ isi edozi isi. Planegbọ elu axial, axis na nkuku dị n’etiti akụkụ ya bụ ihe na - eme ka ọdịiche dị n’etiti otu ụdị na nke ọzọ.
Nhazi mbu nke anyi nwere bu odidi ya. Ekewara ọkwa a n'ime: anticline na synclinal n'ogige atụrụ. Enwekwara mpempe akwụkwọ. Nhazi nke abuo dabere na ntinye nke ugbo elu axial: ebe a ka anyi nwere nkwekorita, nkpoghari na ighaghari. Dị ka axis nke anọghị n'ogige atụrụ anyị cylindrical na conical ndị.
Nkọwa ndị ọzọ a na-ejighi ebe niile bụ ndị na-eji akụkụ dị n'etiti akụkụ na ụkwụ. N'ebe a, anyị nwere folda ndị a:
Adịghị ike-ehulata, interlimbal n'akuku ukwuu karịa 120 Celsius
Open n'ogige atụrụ, interlimbal n'akuku 70 Celsius na 120 Celsius
Mechie ogige, 30 Celsius ruo 70 Celsius
Warara n'ogige atụrụ, 10 Celsius ruo 30 Celsius interlimbal n'akuku
Isoclinal n'ogige atụrụ, interlimbal n'akuku = 0 Celsius
Anticline na mmekọrịta
A na-eji ogige a na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ nke a na-eme nke ọma. Nke a bụ n'ihi na ihe ndị na-eto eto na-eme ka ogige ahụ dị n'elu, ebe ndị okenye na-akpụzi isi. E nwere oge mgbe anyị enweghị ike ịmata afọ nke ihe ndị a ma na nke a ọ ka mma ịkpọ aha a antiform.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ogige mmekọrịta. Ihe njiri mara ya bụ na ọ gbagọrọ agbagọ n’elu. Nke a bụ n'ihi na ihe ndị kacha obere dị n'ime isi, ebe ndị okenye na-etolite ala. N'otu ụzọ ahụ dịka ọnụọgụ mgbochi, ọ bụrụ na anyị amaghị afọ ole ihe ndị ahụ dị, ọ ka mma ịkpọ aha a enweghị ọdịdị.
Mgbe anyị na-ekewa ụdị mpempe akwụkwọ dịka ntinye nke ụgbọ elu axial anyị ga-eburu n'uche ụdị nkuku anyị nwere. N'okwu ndị a, anyị na-ahụ folda na-atọ ụtọ, na-agbanwe agbanwe, na-agbanwe agbanwe ma na-agha ụgha. All folda a nwere ogo 0 rue ogo 90.
Symmetrical folds bụ ebe ebe nkuku guzobere site na axial ụgbọelu hà na abụọ. N'okwu a, nkuku nke ọ na-eme na ụgbọ elu axial kwụ ọtọ. Otherdị mpịakọta nke ọzọ nwere mmasị n'ụzọ nke na otu n'ime akụkụ ya nwere nnukwu nkuku n'akụkụ nke ọzọ.
Morphology nke anticline na synclinal fold
Anyị ga-amalite ịkọwa ogige mgbochi. O nwere etiti ya na akara ngosi. Akụkụ abụọ nke anticline ahụ na-egosi ntụpọ tilt dị iche iche. Strata na-adabere na flanks ruo mgbe ebighi ebi. Site na etiti kwupụta n'akụkụ ahụ manteo ji nwayọ nwayọ na-aba ụba. Otú ọ dị, manteo ahụ dị n'etiti ma ọ bụ ihe efu.
Anyị na-aga ịkọwa ogige mmekọrịta ahụ. Ebe etiti bụ axis nke symmetry. Akụkụ abụọ nke mmekọrịta ahụ na-egosi ntụziaka tilt dị iche iche. Ngwurugwu nke ime ya na-adabere mgbe niile. Manteo, na nke a, bụkwa efu. Onye ọdụdụ nke ọdụdụ na-apụta na etiti yana nke okenye na-anọ n'akụkụ.
Iji nwee ike ịhụ folds ndị a na map ala ọ dị mfe dịka ịchọpụta ugboro ugboro nke ihe ndị ahụ gbasara isi axis. Nke a bụ nkwụsị nke ụgbọ elu axial na elu topographic. Na nke a symmetrical ugboro ugboro nke ihe anyị ga-ewere n'ime akaụntụ outcrop nke ihe. Nke a bụ n'ihi ọkọ na oke ọkpụrụkpụ nke ihe ndị ahụ Ọ na-adabere na ogo nke itinye na ihe ndị nwere na n'elu anyị na-.
Dịka ị pụrụ ịhụ, mbipụta dum nke folds bụ ihe dị mgbagwoju anya. Enwere m olile anya na enyerela m aka ịmata mgbochi na mmekọrịta mmekọrịta na map geologic.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ofdị folda: anticline na syncline
Kedu ihe bụ ụtụ
Oke osimiri Marmara